Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa rasaas laga dhex maqlay Gudaha Xabsiga Dhexe ee Magaalada Muqdisho,waxaana la sheegay inay aheyd rasaastaas mid u dhaxeysay qaar mid kamid ah Maxaabiista oou u hub Gacanta u galay iyo ilaalada Xabsiga.
Maxaabiistan ayaa la aamisan yahay inay ugu xirnaayeen xabsiga dhexe inay ka tirsan yihiin Ururka Al-Shabaab. Illaa hadda ma cadda tirada maxaabiista ku lugta leh weerarka lagu qaaday ciidamada ilaalada xabsiga. Cidamada amniga ayaa weli hawlgal ka wada xabsiga.
Ilaa haatan rasmi ahaan uma soo bixin khasaaraha ka dhashay rasaastan la isku weydaarsaday xabsiga dhexdiisa, waxaase wararku sheegayaan inuu jiro khasaare nafeed oo ka dhashay dhacdadan.
Saraakiisha xabsiga dhexe iyo taliska Ciidanka Asluubta Somaaliyeed weli wax faah faahin ah kama bixin dhacadada Galabta ka dhacday gudaha Xabsiga Dhexe oo ay ku xiran yihiin dad loo heysto dambiyo kala duwan oo ay kamid yihiin inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab.
Xabsiga dhexe ee Xamar ayaa waxaa uu kamid yahay meelaha sida weyn loo ilaaliyo ee dowladda Soomaaliya,waxaana ku sugan Ciidamo farabadan oo ka tirsan kuwa Asluubta Soomaaliyeed.
Goordhow ayaa waxaa Xabsiga Dhexe ee Magaalada muqdisho oo ku yaalla degmada Xamar Jajab ee gobolkan Banaadir waxaa laga dhex maqlay rasaas ka dhaceysa Gudaha Xabsiga.
Weli lama oga cidda ku dagaalameysa Gudaha Xabsiga,hayeeshee warar aan la xaqiijin ayaa waxaa ay sheegayaan in Nin kamid ah Maxaabiista xabsiga uu uu gacanta ku dhigay Qoray,isla markaana uu rasaas bilaabay.
Waxaa jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay rasaasta uu furay qofka maxbuuska ahaa, iyada oo Ciidamada Asluubta iyo kuwo Boolis ah ay wadaan sidii Ninkaasi lagu qaban lahaa.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa la xiriirnay si aan wax uga ogaano rasaasta laag dhex maqlay Xabsiga Dhexe ee Muqdisho balse nooma suurtagelin.
Wararka kusoo kordha kala socda wardeeqnews.com
Wararka aan ka heleyno Gobolka Gedo gaar ahaan Degmada Luuq ayaa sheegaya in xalay halkaas uu ka dhacay dagaal u dhexeeyay Ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya iyo dagaalamayaasha Al-shabaab.
Dagaalka ayaa sida la sheegay yimid, kadib markii xubno hubeysan oo ka tirsan Al-shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen fariisimo Ciidanka Itoobiya ay ku leeyihiin Luuq, waxaana halkaas ka dhacay dagaal muddo socday.
Dadka deegaanka ayaa soo weriyay in xalay ay maqlayeen dhawaqa rasaas xoogan oo dhinacyada ay isdhaafsanayeen, iyadoo dadka deegaanka ay dareemeen casbi, wallow markii dambe uu dagaalka istaagay.
Al-shabaab warar qoreen barahooda dhinaca Internet-ka ayaa waxaa ay sheegeen in dagaalkii ka dhacay Degmada Luuq ee Gobolka Gedo ay Ciidanka Itoobiya uga dileen Hal Askari, halka tira kalane ay dhaawacyo soo gaareen.
Al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro isugu jiray mid toos ah iyo qaraxyo ku qaaday Ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM, waxaana inta badan weeraradaas ka dhashay Khasaarooyin kala duwan oo gaaray Ciidamada Itoobiya.
Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Saraakiisha sare ee Ciidanka Xoogga dalka iyo kuwa Booliska dowladda oo ay uga hadlayaan qaraxii ka dhacay Xerada Guutadda 12-ka April ee Ciidanka Xoogga Dalka
Balse Ruushka ayaa eeddaasi gaashaanka u daruuray. Madawyene Trump oo Jmcihi shir jaraa’id qabtay oo wax laga weydiiyey waxa uga qorsheysan inuu ka qaado faragelinta uu sheegay in lagu hayo doorashada Mareykanka, Madaxweyne Trump wuxuu sheegay maamulkiisu in “si dhow uu ula soconayo” arrinta.
WAR, DEG, AH,, Khasaaraha Ka Dhashay Qaraxii Ismiidaaminta Ee Muqdisho
Al-shabaab iyo ciidanka Millateriga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dagaalamay duleedka Magaalada Marka ee xarunta Gobalka Shabeellaha Hoose, waxaana la sheegay in dagaalkaas uu khaasaare ka dhashay.
Dagaalka ayaa yimid ka dib markii Al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidanka Millateriga ku leeyihiin degaanka Ceeljaale oo ah duleed magaalada Marka.
kala soco wararka wardeeqnews